Andravoahangy, un échec de la circulation – Horizon Azur
Publié par Critix le 24/12/2012 24/12/2012
circulation à Antananarivomarché d'Andravoahangy
Article précédent Madagascar, attention aux carburants!
Article suivant Le kitoza, bon et dangereux … pour les dents
Zo Andriamifidisoa dit :
24/12/2012 à 13:39
Izaho moa efa niteniteny tamin’izay nifampiresahako na dia heverina ho fahadalàna sy tsy azo tanterahina aza ny hevitro fa tsy misy afa-tsy ny fanesorana ny tsena tsy mitafo, izany hoe tsy anaty trano tsy misy fidiovana, eto Antananarivo no vahaolana voalohany fa afindra any amin’ny faritra manodidina ny renivohitra daholo izy rehetra ireo. Na dia ny tsena anaty fefy aza dia tsy ekena satria manana fironana hivoaka ny vala hatrany ny olona. Mbola hanjaka io hevitro io raha tena tiana marina ny hivelarana sy handrosoan’Antananarivo.
marina mihitsy fa raha ny tokony ho izy dia avoaka ny faritry ny renivohitra no misy ny tsena, nefa tsy ilaozan’izay mivarobarotra aty anatiny ihany dia mahatsiaro maty antoka indray ireo mpivarotra an-tsena. Raha ny marina dia betsaka amin’ireo mpivarotra no tsy tokony hivarotra noho ny antony maro isan-karazany.